अन्य फोटो स्टोरीहरु
हाइपरटेन्सन र भिटामिन डी
औलो ज्वरो- छोटो जानकारी
तौल व्यवथापनको लागि प्रमुख १० तरिकाहरु
Q मानिसहरूलाई जनावरहरूबाट संक्रमण हुन सक्दछ ?
हो। जनावरहरूबाट मानवलाई सर्ने रोगलाई जुनोजेज वा जुनेटिक रोग भनिन्छ । जनावरहरुले प्रत्यक्ष सम्पर्क वा खाना र पानीको प्रदूषणबाट केही जीवाणु, भाइरस र दादको संक्रमणलाई सार्न सक्दछ । उनीहरूले केही अवस्थाहरूमा एलर्जी प्रतिक्रिया पनि गराउन सक्छन् । यस्ता जनावरहरुबाट हुने संक्रमण विशेषगरि बच्चाहरु र साना बच्चाहरु, गर्भवती महिलाहरु, बुद्ध मानिसहरु, र बिरामी वा रोगबाट कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका मान्छेहरुलाई खतरनाक हुन सक्छ ।
Q आतंकित हमला भनेको के हो ?
आतंकित हमला कुनै कुरा थाहा नै नभइ तीव्र डर वा चिन्ताको कारणले गर्दा अचानक शुरुवात हुन्छ । आतंकित हमला हुन्छ र केही मिनेट सम्म रहन्छ र कुनै पनि औषधि बिना नै यो आफ्नै गायब हुन सक्छ । कहिलेकाँही, आतंकित हमला धेरै डरलाग्दो हुन सक्छ । तपाईंले आतंकित आक्रमणको क्रममा गर्न सक्ने केहि अनुभवहरू निम्न प्रकारका हुनेछन् - धड्कन बढ्नु, पसीना आउनु, काम्नु, श्वासको छोटो छोटो हुने, श्वास बन्द हुन खोजें जस्तो हुने, छाती दुख्ने र बिरामीको जसतो अनुहार हुनु आदि । यदि हमला निरन्तर हुन्छ भने, तपाईंलाई चिकित्सकसँग परामर्श लिने सबैभन्दा राम्रो संभवित उपचार बिधी हो ।
Q मेरो शिथिल हुँदाको लिङ्गको आकार ३ ईन्च मात्रै छ र उत्तेजित हुदाँ नाप्दा यो ४.८-५.२ सम्मको छ । मेरा आमाबाबुले मलाई अर्को वर्ष विवाह गर्न दबाव दिइरहनु भएको छ । म २७ बर्षको छु । म यो आकारको लिङ्गले मेरी श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न सक्षम हुनेछु । कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् ।
हो । तपाईंको पक्कै सामान्य आकारको लिङग छ । महिलाको योनिको बाहिरी भागको १ इन्च मात्रै संवेदनशील हुनेभएकोले, तपाईंले लिङ्गको लम्बाइको बारेमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन । लिङ्गको आकारभन्दा उत्तेजना हुने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ जसले स्वस्थ यौन सम्बन्धको सुनिश्चित गर्नेछ । यसको साथै यौन सम्बन्ध राख्ने कौशलता लिङ्गको आकारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
Q चन्द्र चरणको मानसिक रोगसँग केहि सम्बन्ध छ ?
त्यहाँ अध्ययनहरू भएका छन् जसले मानसिक रोगहरुबाट पीडित व्यक्तिको लक्षणहरू पूर्ण चन्द्रमा लागेको बेलामा भड्किने वा उत्तेजित हुने बताउँदछ । त्यहाँ अध्ययनहरू पनि भएका छन् जसले चन्द्रमाको चरणहरूमा मात्र मानसिक रोग लागेका मानिसहरु वा सिजोफ्रेनिक बिरामीहरूमा मात्र प्रभाव पार्छ भन्छन् । तथापि, हालैका धेरै अध्ययनहरूले चन्द्रमाका चरणहरू र मानसिक रोगहरूको बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन भनेर पत्ता लगाएका छन् ।